युएईमा रहेकाकस्ता ब्यक्तिले पाउछन् युएईको नागरिता ?
युएई : युएई ले नागरिकता कानूनमा संशोधनलाई अनुमोदन गरेको छ, जसले लगानीकर्ताहरू, पेशेवरहरू, विशेष प्रतिभाहरू र तिनीहरूका परिवारहरूलाई निश्चित सर्तहरूमा
इमिरेटी नागरिकता र राहदानी प्राप्त गर्न अनुमति दिएको छ।
यस कदमको उद्देश्य युएईमा रहेको प्रतिभा र योग्यताको कदर गर्ने र एमिराटी समुदायलाई “देशको विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने तरिकामा उज्यालो दिमागलाई आकर्षित गर्ने” रहेको छ।
युएईको नागरिता वा पासपोर्टका लागि क कस्ले आवेदन दिन पाउछन् वा कस्ता ब्यक्तिले युएईको नागरिता प्राप्त गर्न सक्छन् । तल हेर्नुस् । लगानीकर्ताहरू, डाक्टरहरू, विशेषज्ञहरू, आविष्कारकहरू, वैज्ञानिकहरू, प्रतिभा, बुद्धिजीवीहरू, कलाकारहरू, माथिका सबै वर्गका परिवारहरू।
इमिरातीको नागरिकता प्राप्त गर्ने कार्य शासक र युवराजको अदालत, कार्यकारी परिषद् र मन्त्रिपरिषद्बाट संघीय निकायको नामांकनको आधारमा गरिने छ।
युएइ नागरिकताले व्यावसायिक संस्था र सम्पत्तिहरू स्थापना गर्ने वा स्वामित्व पाउने अधिकार सहित लाभहरूको विस्तृत दायरा प्रदान गर्दछ।
नियम र सर्तहरू के हुन्?
लगानीकर्ताहरू, उनीहरूलाई युएईमा सम्पत्ति हुनु आवश्यक छ, डाक्टर र विशेषज्ञहरू जरुरी छ । तिनीहरू एक अद्वितीय वैज्ञानिक अनुशासन वा युएईमा अत्यधिक आवश्यक कुनै अन्य मा विशेष हुनुपर्छ।
आवेदकले आफ्नो विशेषज्ञताको क्षेत्रमा प्रतिष्ठित संस्थामा सदस्यता प्राप्त गर्नका साथै वैज्ञानिक योगदान, वैज्ञानिक मूल्यको अध्ययन र अनुसन्धान र १० वर्ष भन्दा कमको व्यावहारिक अनुभवलाई स्वीकार गरेको हुनुपर्छ।
उनीहरूलाई विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्र वा निजी क्षेत्रमा सक्रिय अनुसन्धानकर्ता हुन आवश्यक छ, समान क्षेत्रमा १० वर्ष भन्दा कमको व्यावहारिक अनुभवको साथ। तिनीहरूसँग वैज्ञानिक क्षेत्रमा पनि योगदान हुनुपर्दछ जस्तै प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार जित्ने, वा विगत १० वर्षहरूमा उनीहरूको अनुसन्धानको लागि पर्याप्त रकम सुरक्षित गर्ने। युएई मा मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक संस्थाहरु बाट सिफारिस पत्र प्राप्त गर्न पनि अनिवार्य छ।
तिनीहरूले अर्थ मन्त्रालयबाट सिफारिस पत्रको अतिरिक्त युएई को अर्थ मन्त्रालय वा कुनै अन्य प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट अनुमोदित भएको एक वा बढी प्याटेन्टहरू प्राप्त गर्न आवश्यक छ।
बुद्धिजीवी र कलाकारहरू संस्कृति र कला क्षेत्रहरूमा अग्रगामी र एक वा बढी अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार (हरू) को विजेता हुनुपर्छ। सम्बन्धित सरकारी निकायबाट सिफारिस पत्र पनि अनिवार्य छ।
यदि एक योग्य छ भने, अन्य आवश्यकताहरूमा वफादारीको शपथ लिनु समावेश छ; एमिराटी कानून पालन गर्न प्रतिबद्ध; र कुनै अन्य नागरिकता प्राप्त वा गुमाएमा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई आधिकारिक रूपमा सूचित गर्ने।
नागरिकता फिर्ता लिन सकिन्छ ?
परिमार्जन अनुसार सर्त उल्लंघन गरेमा नागरिकता फिर्ता लिन सकिनेछ ।
२०७९ बैशाख ५, सोमबार प्रकाशित0Minutes 230 Views